Tuesday July 10, 2018 - 14:04:00 in Wararka by Super Admin
Wadanka Thailand ee dhaca qaaradda Aasiya Warar laga helayo ayaa sheegaya in lasoo badbaadiyey 4 kamid ah 12 carruur ah iyo macalinkooda oo ku go'doomay mid kamid ah buuraha wadankaas kadib markii fatahaado xooggan ay halkaas ka dheceen.
Carruurtaan 12 ka ah iyo macalinkooda ayaa horraantii isbuucii tagay u damaashaad tagay mid kamid ah buuraha loo dalxiiska tago ee kuyaalla mandiqadda Shiyang Rey ee dhacda woqooyiga wadanka Thailand, balse intii kuguda jireen buurta ayay roobab xoogani ka da’een gadaashooda kuwaas oo sababay in ay ku go'domaan buurta hoosteeda.
Dowladda Thailand oo kaashaneysa Khubaro caalami ah ayaa biloowday howllaha loogu gurmanayo caruurtan laba maalin kadib markii la helay goobta ay ku go’doonsan yihiin, laakin dowladu waxa ay sheegtay in soo bixintooda ay tahay mid aad u halis badan aysan suurta gal tahay in ay qaadato mudo isbuucyo ah.
Ciidanka Badda Thailand ayaa dhowr jeer isku dayey inay carruurta gaaraan, iyagoo isticmaalaya qalabka dabaasha, maadaama dhulka ku xeeran buurta ay carruurtu kujiraan ay maasheeyeen Biyo fara badan, isku dayadaas ayaana sababay in mid kamid ah saraakiisha ciidankooda gaarka ah uu ku geeriyoodo biyaha.
Carruurta iyo macalinkooda ayaa kujira god weyn oo kanqodan mid kamid ah buuraha halkaas ku yaala hoostooda, waxaana la sheegaya in Masaafada ay gudaha u galeen ay dhantahay 2 Km oo buurta hoosteeda ah, in lagaarana ay qaadaneyso 3 saac oo dabaal ah.
Sarkaal katirsan kooxaha gurmadka degdega ah ee xukuumadda Thailand ay arrinkaan u xilsaartay ayaa sheegay in howsho aysan sahal ahayn loona baahan yahay in caruurta mid mid loosoo saaro, taas oo laga yaabo in badbaadinta halkii cunugba ay qaadato 11 saac oo xiriir ah.
Howlaha Badbaadinta carruurta ayaa si toos ah u bilowday shalay aroorti hore, intii ka horeysayna waxaa lagu guda jiray, sahminta iyo diyaarinta qaabka loosoo badbaadin karo iyagoo badqaba, isla shalayna waxaa lagu guuleystay in lagasoo saaro godkaasi 4 kamid ah carruurti halkaa ku jrtay.
Caqabada hor taagan in caruurta mar qura lagasoo bixiyo buurta hoosteeda ayaa lagu sheegaya inay kamid tahay, Biyaha oo aad u badan, dariiqa la isticmaalayo oo ah mid ciriiri ah, masaafada oo aad udheer ayna suurta gal tahay in caruurto ay dabaalan waayan, maadama jirkooda uusan u diyaarsaneyn iyo Oxghinka oo ku yar dhulka buurta hoosteeda ah.
4ta caruurta ah ee lasoo badbaadiyey ayaa la dhigay isbitaal caafimaad o kuyaaala wadanka Thailand, waxaana lagu wadaa in manta kuwa kale lasoo badbaadiyo, balse waxaa jirto cabsi xoogan oo laga qabo roobab la sheegayo in mandiqada ay kusoo wajahanyihiin, kuwaas oo ay suurta gal tahay inay hor istaagaan howlaha badbaadinta caruurta kale ee halkaas ku go’doonsan.
badbaadinta 8 caruurta ah iyo macalinkooda ee kuharay buurta hoosteeda ayaa laga yaaba inay qaadato 3 ilaa 4 maalin oo kale, hadii aysan bilaaban roobabka laga cabsida qabo, sida ay sheegayaan masuuliyiin katirsan xukuumada Thailand.
Al Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda Qarax lagu dilay Sarkaal Turki ah.
Al Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qarax Xildhibaan lagu dilay oo Kismaayo ka dhacay.